Dawlada Degaanka Somalida Ethiopia oo Laga Sugayo Horumarinta Gabalada ay Colaadu Dib u Dhigtay – Rasaasa News
Jun 28, 2011 Dadweynaha Degaanku, Dawlada Degaanka Somalida Ethiopia oo Laga Sugayo Horumarinta Gabalada ay Colaadu Dib u Dhigtay, ka sugayaa wax ka qabashada dhibaatada ka jirta gabalada ay horumarintooda curyaamisay colaadii ka jirtay degaanka Somalida Ethiopia tan iyo intii ay xukuumada cusub ee Ethiopia dhalatay., waxay dawlada degaanka Somalida Ethiopia
Dadweynaha Degaanku, waxay dawlada degaanka Somalida Ethiopia, ka sugayaa wax ka qabashada dhibaatada ka jirta gabalada ay horumarintooda curyaamisay colaadii ka jirtay degaanka Somalida Ethiopia tan iyo intii ay xukuumada cusub ee Ethiopia dhalatay.
Gabalada ay waxyeelada ku reebtay colaadu ayaa kala ah gabalka Shabeele [godey], gabalka Doolo [wardheer], gabalka Qoraxeey, gabalka Jarar [dhagaxbuur] iyo gabalka Nogob, kuwaas oo ayna wali muuqan wax talaabo horumarineed ah oo ay dawladu hore qaaday, marka laga reebo mashaariicdii hore u jirtay.
Xukuumada Federalka ah ee hada ka jirta Ethiopia, ayaa runtii wax qabad muuqda ka samaysay inta badan gabalada dalka Ethiopia.
Degaanka Somalida oo ka mid ah dalka Ethiopia, ayaa aad u dib dhacsan dhinac walba oo laga eego. Sida ay marar badan sheegtay xukuumada Meles Zinawi ee dalka Ethiopia, waxay eeda oo dhan u xambaarisaa xukuumadihii hore iyo Jabhadihii ka dagaalami jiray degaanka Somalida Ethiopia.
Muddo hada ku siman hal sano, ayey Jabhadihii dagaalka waday heshiis nabadeed la gaadheen dawlada dhexe ee wadaaga Ethiopia, jabhaduhuna wax walbana ku badsheen nabad iyo nolol, in kasta oo ay jiraan dad yar madax adag. “Peace begins with a smile.” — Mother Teresa
Heshiiska nabadeed ka dib, waxay dawladu dajisay miisaaniyad ay ugu talo gashay in dib u dajin loogu sameeyo xunihii qoriga watay ee Jabhadaha nabada qaatay si bulshada lagu dhexdaro, in maxaabiista hore jabhada looga qabtay iyana la jaheeyo, soo celinta dadkii wadanka barakacay iyo kasbashada kuwa nabada diiday.
Dawlada degaanka Somalida Ethiopia, arinkaas ay dawlada dhexe u xil saartay, waxay qabsatay oo kaliya jumlada ugu dambaysa ee kasbashada kuwa nabada diiday.
Waxaa la sheegay in ay masuuliyiinta degaanku sameeyeen safaro is xig xiga, waxaa kale oo ay bixisay tigidho, gunooyin iyo habeen dhaxyo lagu bixiyey qurbo-joogta degaanka Somalida Ethiopia, xili ay abaaro xun dalka ka jireen.
Dadweynaha ku nool degaanka Somalida Ethiopia, ayaa aad u karhay kharajyada faraha badan ee ay dawlada degaanku ku bixinayso dad aan u baahnayn ee Qurbo-joogta ah.
Waxaa hubaal ah, in aqoonyahanka u dhashay degaanka Somalida Ethiopia, oo ah indhaha ummada degaanka Somalida, ayna soo dhawaynin arintaas, kana jeclaan lahaayeen in ay miisaaniyadaasi ku baxdo mashaariic waxtar u leh dadweynaha degaanka.
Safarada dibada masuuliyiinta degaanku waxaan filayaa in ay uga gol lahaayeen in ay helaan dadweynaha degaanka u dhashay ee dibadaha si ay uga dhex helaan dad waxtar u leh dalka iyo dadkaba, arintaas oo ayna wali faafin dawlada degaanku.
Tan iyo intii ay dhacday nabada degaanku, waxaa ka baxa Telefiishinka Ethiopia qaybta Somaliga muuqaalo, badan oo borobagaando ah oo ku kooban horumaka ka jira Jijiga iyo nawaaxigeeda.
Waxaanse meesha marna ka muuqan degaanadii ay dhibaatooyinku haysteen, kuwaas oo ay wanaagsanaan lahayd in ay dadweynuhu arkaan waxa hada ka socda iyo wixii ka jiray.
Laakiin, runtii Jijiga, oo ah fadhiga dawlada degaanka Somalida Ethiopia, awal horeba dhibaato kama jirin dhincyada nolosha iyo nabad galiyada midna.
Horumar la,aanta iyo colaaduhu waxay saameeyeen lix gabal oo ka mid ah degaanka Somalida Ethiopia, kuwaas oo runtii u baahan horumarin deg deg ah [marshal plan]. Walise ma muuqato in ay dawlada dhexe iyo dawlada degaanka Somalida Ethiopia ay taabanayaan wadnaha dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia.
Hal barkad oo loo qodo, mid ka mid ah dadweynaha ku nool degmooyinkaas, waxay gali kartaa diiwaanka dawlada, waxaana manaafacaadsan dadweyne badan oo u baahan. [ xusuus: qiimaha hal barkad waxaa uu u dhigmaa hal tigidh oo Europe ah].
Ururadii ka dagaalami jiray degaanka, waxay ku doodi jireen in xooggaaga mashaariicda ah ee ay dawladu samayso uu ka keeno dagaalka aanu kula jiro.!
Waxaa hubaal ah in ay nabad galiyo ka dhacday degaanka Somalida, nabadaas oo uu qaatay dadweynaha u dhashay degaanka Somalida Ethiopia dibad iyo gudaba, cid walba oo isku dayda in ay waxyeelaysan ayna u ogolaan doonin.
Xukuumada dhexe iyo dawlada degaanka Somalida Ethiopia, waxaa looga fadhiyaa in ay isbadala muuqda oo dhinaca horumarinta ah soona jiidan kara aqoonleyda iyo dadweynaha degaanka ay ka samayso degaanka Somalida Ethiopia, gaar ahaana kuwa loo samababeeyo horumar la,aanta ururadii dagaalami jiray.
Dhib, ayaa abuura dhibaato.